Qareen - Child Care Aware WA
Daryeelka cunugga ee tayo sare leh wuxuu ka caawiyaa dhammaan bulshada. Carruurtu way fiicnaayeen, qoysasku waxay kasbadaan shaqaale badan, ganacsiyadu waxay leeyihiin shaqaale weyn.
Daryeelka Carruurta Ogeysiiska Washington wuxuu ka caawiyay in uu la cayaaro 1 ilmo leh xanaano caruur oo tayo sare leh Sanitan sanadkii hore.
90% maskaxda ilmaha waxay ku dhacdaa shanta sano ee ugu horreysa waxayna abuurtaa hal milyan oo xidhiidh cusub oo neuronal ah labadaba.1 Daryeelka Carruurta Ogeysiiska Washington wuxuu ka caawiyay 265 carruur ah oo leh xanaano caruureed oo tayo sare leh ee gobolka Skagit sannadkii hore.
mushahar ka badan
Daryeelka Xanaanada Caruurta Washington wuxuu ka caawiyay in ay la cayaaraan 2 carruur ah oo leh xanaano caruureed oo tayo sare leh gobolka Skamania sanadkii hore. 2
waxay u badan tahay
Sanadkii la soo dhaafey tirada hay'adaha xanaanada cunugga ruqsada haysta ayaa hoos u dhacay 611 illaa 506 bixiyayaal liisan leh, halka adeegyadii hartay ee koray 938 carruur ah. 3
Daryeelka Carruurta Ogeysiiska Washington wuxuu ka caawiyay 1,633 carruur ah oo leh xanaano caruureed oo tayo sare leh ee gobolka Snohomish sannadkii hore.
Degmada Spokane 4
Sanadkii la soo dhaafey tirada shaqaalaha xanaanada cunugga ruqsada haysta ayaa hoos u dhacay 307 illaa 284 bixiyayaal liisan leh, iyada oo adeegga hartay ee koray 831 carruur ah.
Iyada oo ay carruurtu ku kici doonto $ 1,000 bishii, xanaanada cunugga waxay noqon kartaa qarashka ugu weyn ee qoyska. Hase-yeeshe, bixiyeyaasha xanaanada cunugga waxay inta badan ku nool yihiin saboolnimo Waa maxay sababta?
Daryeelka carruurtu aad buu u shaqeeyaa. Mushaharku wuu hooseeyaa maxaa yeelay qoysasku ma bixin karaan wax intaa ka badan. Farqiga u dhexeeya waxa ku kacaya in la bixiyo daryeel tayo sare leh iyo waxa qoysaska ay awoodaan ayaa waxaa uga sii daray kaabista daryeelka carruurta oo hooseeya. Baro waxa Child Care Aware ee Washington wuxuu diiradda saarayaa hadda si loo joogteeyo loona xoojiyo nidaamkayaga daryeelka carruurta - Ingiriisi, Isbaanish.
Gobolka Washington, kabitaanku wuxuu daboolayaa kaliya seddex meelood meel kharashka barnaamijka tayo sare leh. Baro wax badan oo ku saabsan sida sicir-celinta lacag-bixinta ee gobolka ay saameyneyso xanaanada cunugga.
Baro sababta tayada xannaanada carruurta ee tayada leh ee fiidiyowga ah.
Ingiriisi // Isbaanish // Soomaali
Kordhinta Caawinta Qoysaska Shaqeeya
Siinta Taageero Maaliyadeed Bixiyeyaasha Daryeelka Ilmaha
Muhiimadda deeqaha waxbarasho ee ECE
Child Care Aware ee Washington waxay bixisaa macluumaad faahfaahsan oo madaxbannaan iyo taageero si loo caawiyo:
72% bixiyeyaasha xanaanada cunugga ee liisan bixiya ee gobolka ayaa ka diiwaangashan Gaarayaasha Hore, taas oo ka caawisa bixiyeyaasha in ay sii wataan barnaamijyadooda barbaarinta hore.
Daryeelka Caruurta Ogeysiiska Washington wuxuu ka caawiyay in lagu ciyaaro 20 caruur ah oo leh xanaano caruureed oo tayo sare leh oo ku yaala Stevens County sanadkii hore.
Guji gobalka hoose si aad u hesho xogta daryeelka ilmaha ee gaarka ah, oo ay ku jiraan diyaargarowga xanaanada caruurta, saboolnimada caruurta iyo boqolkiiba caruurta ka yar lix sano oo ku nool guryaha dadka waaweyn ee shaqeeya.
Sanadkii la soo dhaafey tirada shaqaalaha xanaanada cunugga ruqsada haysta ayaa hoos uga dhacay 243 illaa 201 oo bixiyayaal ruqsad haysta, iyada oo adeegga hartay ee koray 831 carruur ah. Daryeelka Caruurta Ogow Washington waxay raadineysaa in ay ka caawiso ilmo kasta inuu helo barnaamijyo daryeel oo tayo sare leh iyo barnaamijyada waxbarashada hore. Degmada Wahkiakum © 2018 Daryeelka Carruurta Ogow Washington Daryeelka Xannaanada Carruurta Washington waxay ka caawisay in ay la cayaarto 4 carruur ah oo leh daryeel caafimaad oo tayo sare leh ee gobolka Wahkiakum sanadkii hore. Walla Walla County Sanadkii la soo dhaafey tirada shaqaalaha xanaanada cunugga ruqsada haysta ayaa hoos uga dhacay 56 illaa 52 adeeg bixiye ruqsad leh, iyada oo adeegga hartay ee koray 39 carruur ah. https://ccawa.jayray.mvestor.com/wp-content/uploads/2018/08/boy-painting-families-featured.jpg Daryeelka Caruurta Ogeysiiska Washington wuxuu ka caawiyay in uu u dhigmo 170 caruur ah oo leh xanaano caruureed oo tayo sare leh ee Walla Walla County sanadkii hore. Whatcom County Sanadkii la soo dhaafey tirada hay'adaha xanaanada cunugga ruqsada haysta ayaa hoos uga dhacay min 133 illaa 109 bixiyeyaasha liisan leh, hoos u dhigidda awoodda 113. summary_large_image Degmada Whitman Sanadkii la soo dhaafey tirada shaqaalaha xanaanada cunugga ruqsada haysta ayaa ka kordhay 23 ilaa 25 shirkadood oo ruqsad haysta, oo kor u qaadey awoodda 192 carruur ah. 62% ka bixiyeyaasha xanaanada cunugga shatiyaysan ee gobalka ayaa ka diiwaangashan Gaarayaasha Hore, kaas oo ka caawiya bixiyeyaasha inay kobciyaan barnaamijyadooda waxbarashada hore. Daryeelka Xannaanada Caruurta Washington wuxuu ka caawiyay in ay la ciyaaraan 42 carruur oo leh xanaano caruureed oo tayo sare leh oo ku yaala Degmada Whitman sanadkii hore. Jefferson Sannadkii hore tirada bixiyayaasha xanaanada cunugga ruqsada haysta ayaa hoos uga dhacay 416 illaa 336 bixiyayaal liisan leh, hoos u dhigidda awoodda 494. 89% bixiyeyaasha xanaanada cunugga ee liisan bixiya ee gobolka ayaa ka diiwaangashan Gaarayaasha Hore, kaas oo ka caawiya bixiyeyaasha inay kobciyaan barnaamijyadooda waxbarashada hore. Daryeelka Xannaanada Carruurta Washington wuxuu ka caawiyay 799 carruur ah oo leh daryeel caafimaad oo tayo sare leh oo kuyaal gobolka Yakima sannadkii hore. Aruurinta Arbacada Daryeelka Carruurta Warbixinta Warbixinta Gobolka iyo Gobolka Xogta Warbixinta Macluumaadka Daryeelka Ilmaha Ka warbixi lifaaqyada Waalidiinta iyo Kharashka Sare ee Daryeelka Caruurta 2015 Warbixinta Waalidiinta iyo Kharashka Sare ee Daryeelka Caruurta 2014 Warbixinta Khayraadka Kale Isbedelada carruurta Xarunta Macluumaadka Kids Si aad u furto warbixinnada, waa inaad haysataa Acrobat Reader. Haddii aadan haysan Acrobat Reader, fadlan riix halkan si aad u soo qaadato nuqul bilaash ah. Macluumaadka ku saabsan sida Daryeelka Xannaanada Carruurta ee Washington u adeegsato xogta xanaanada cunugga, Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan warbixinta xogta, fadlan la xiriir Karen Sampson at karen@wa.childcareaware.org Kulanka Sharci-dejinta Kulanka Sharciga ee 2018 wuxuu dhamaaday Bisha Maarso 8. Miisaaniyadii ugu danbeeyay waxa ku jira guulo yar oo dhab ah oo loogu talagalay daryeelka ilmaha iyo barashada hore.
CCA oo ah King & Pierce Counties	Maalgelinta iyo siyaasadda ayaa la ansixiyey taageerada la-talinta kalkaalisada cilmi-baarista ee bixiyeyaasha.
Barnaamijyada ECEAP waxaa la siiyay awood dheeri ah oo dheeraad ah, taas oo u oggolaanaysa barnaamijyo miyiga ah in ay ku shaqeeyaan.	Booqashada guriga waa la ballaariyay.
85% bixiyeyaasha xanaanada cunugga ruqsada haysta ee gobolka ayaa ka diiwaangashan Early Achievers , kaas oo ka caawiya bixiyeyaasha inay kobciyaan barnaamijyadooda waxbarashada hore.
75% bixiyeyaasha xanaanada cunugga ruqsada haysta ee gobolka ayaa ka diiwaangashan Early Achievers , kaas oo ka caawiya bixiyeyaasha inay kobciyaan barnaamijyadooda waxbarashada hore.
Child Care Aware ee Washington waxay gacan ka gaysatay 8 carruur ah oo leh daryeel caafimaad oo tayo sare leh Gobolka Asotin sanadkii hore.
Tirada adeeg bixiyeyaasha xanaanada cunugga ayaa hoos u dhacay 20% 5 sano, xarumaha xanaanada carruurta ee waaweyn waxay kordhinayaan awoodda. Inkastoo hoos u dhac ku yimid adeeg bixiyeyaasha xanaanada cunugga dhowaanahan xasiliyay, gobollada qaar ayaa sii wadaya inay arkaan hoos u dhac.
83% bixiyeyaasha xanaanada cunugga ruqsada haysta ee gobolka ayaa ka diiwaangashan Early Achievers , kaas oo ka caawiya bixiyeyaasha inay kobciyaan barnaamijyadooda waxbarashada hore.
CCA oo ah King & Pierce Counties
82% bixiyeyaasha xanaanada cunugga ee liisan bixiya ee gobolka ayaa ku qoran Early Achievers , kaas oo ka caawiya bixiyeyaasha inay kobciyaan barnaamijyadooda waxbarashada hore.
50% bixiyeyaasha xanaanada cunugga ruqsada haysta ee gobolka ayaa ka diiwaangashan Early Achievers , kaas oo ka caawiya bixiyeyaasha inay kobciyaan barnaamijyadooda waxbarashada hore.
Child Care Aware ee Washington waxay gacan ka gaysatay 3 carruur ah oo leh daryeel carruur oo tayo sare leh Degmada Garfield sanadkii hore.
Child Care Aware ee Washington waxay ka caawisay 19 ciyaartoy oo leh daryeel carruureed tayo sare leh ee Jefferson County sannadkii hore.
70% bixiyeyaasha xanaanada cunugga ruqsada haysta ee gobolka ayaa ka diiwaangashan Early Achievers , kaas oo ka caawiya bixiyeyaasha inay kobciyaan barnaamijyadooda waxbarashada hore.
Child Care Aware ee Washington waxay ka caawisay 11 ciyaartoy oo leh daryeel carruureed tayo sare leh ee gobolka Klickitat sanadkii hore.
Child Care Aware ee Washington waxay gacan ka gaysatay 163 carruur ah oo leh daryeel caafimaad oo tayo sare leh Gobolka Lewis sanadkii hore.
Pend County Oreille
100% bixiyeyaasha xanaanada cunugga ee ruqsada haysta ee gobolka ayaa ku qoran Early Achievers , kaas oo ka caawiya bixiyeyaasha inay kobciyaan barnaamijyadooda waxbarashada hore.
71% bixiyayaasha xanaanada cunugga ee ruqsada haysta ee gobolka ayaa ku qoran Early Achievers , kaas oo ka caawiya bixiyeyaasha inay kobciyaan barnaamijyadooda waxbarashada hore.
88% bixiyeyaasha xanaanada cunugga ee ruqsada haysta ee gobolka ayaa ku qoran Early Achievers , kaas oo ka caawiya bixiyeyaasha inay kobciyaan barnaamijyadooda waxbarashada hore.
Gobolka iyo Gobolka
2019 Daryeelka Carruurta
2018 Daryeelka Carruurta
Gargaarka Daryeelka Carruurta ee 2018 ee Gobolka Washington
Macluumaadka Daryeelka Ilmaha
Ka warbixi lifaaqyada
Waalidiinta iyo Kharashka Sare ee Daryeelka Caruurta 2015 Warbixinta
Waalidiinta iyo Kharashka Sare ee Daryeelka Caruurta 2014 Warbixinta
Xog qoto dheer oo la xiriirta sida loo awoodi karo xanaanada cunugga, COVID-19 saamaynta iyo inbadan oo ku saabsan Gobolka Washington iyo Mareykanka
Xarunta Macluumaadka Kids
Si aad u furto warbixinnada, waa inaad haysataa Acrobat Reader. Haddii aadan haysan Acrobat Reader, fadlan riix halkan si aad u soo qaadato nuqul bilaash ah.
Wixii macluumaad ah ee ku saabsan sida Child Care Aware ee Washington waxay isticmaalaan macluumaadka bixiyaha xanaanada cunugga, riix halkan.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid warbixinnada warbixinnada, fadlan la xiriir Sarah Kelley oo ah sarah@childcareawarewa.org.
Kulanka Sharci-dejinta ee Gobolka
The 2022 session of the Sharci dejinta Gobolka Washington began on Jan. 10, 2022, and you can see what we are advocating for on our 2022 legislative agenda (Ingiriisi / Isbaanish / Soomaali). Learn more about why investments are needed in Washington’s child care system here: (Ingiriisi/Español).
To learn more about our multi-year strategy to connect families with expanded Play and Learn Groups in their communities, click halkan.
Take Action! Advocate for increased Family, Friend and Neighbor support on social media (Ingiriisi/Isbaanish) or by writing to your legislators (Ingiriisi/Isbaanish).
Marna ma aha wakhti hore ama waqti dambe si aad ugu oggolaato sharci dejiyeyaashaada inay ku ogaadaan inaad taageerto maalgelinta gobolka ee xanaanada caruurta ee tayo sare leh Early Achievers , iyo in la kordhiyo sicirka lacagta lagu bixiyo bixiyeyaasha ee aqbalaya carruurta deeqda dawladda / Xiriirinta Shaqada Daryeelka Carruurta.
Bishii Diseembar, Koongarasku wuxuu bixiyay lacag bixin horudhac ah oo si aad ah loogu baahan yahay taageero maaliyadeed oo bixisa $ 10 bilyan oo loogu talagalay daryeelka carruurta. Bishii Janaayo ee 2021, Madaxweyne Biden wuxuu soo jeediyay $ 40 bilyan oo dheeraad ah oo loogu talagalay gargaarka daryeelka carruurta. Laakiin, xubno badan oo ka tirsan Koongareeska ayaan hubin inay bulshooyinka iyo qoysasku u baahan yihiin taageero dheeri ah. La xiriir xubnahaaga kongareeska iyo dumarka maanta inay ku booriyaan taageeradooda caawimaad dheeraad ah daryeelka ilmaha.
Waalidiinta taxaddar leh! Noqo Safiirka Waalidka oo faraq u yeesha nolosha carruurta!
Noqoshada Safaarada Waalidiintu waa fursad aad u wayn oo aad ku biiri karto beelaha doodaha kuwaas oo si xamaasad leh u xannaaneeya balaarinta helitaanka barnaamijyada daryeelka ilmaha ee tayo sare leh iyo barnaamijyada waxbarashada hore si qoysas badani ay uga faa'iideystaan.
Faahfaahin dheeraad ah ka ogow Ururka Washington ee Head Start & ECEAP
Diyaar ma u tahay inaad dalbato? Guji halkan / aquí dalabka.
Is-beddelka Goboleed ee A-Glance
Bixiyeyaasha Dheeraadka ah
Tirada dadka waaweyn
Kharashka Daryeelka Xanaanada Carruurta
Tirada adeeg bixiyeyaasha xanaanada cunugga ayaa hoos u dhacay 20% 5 sano, xarumaha xanaanada carruurta ee waaweyn waxay kordhinayaan awoodda. Inkastoo hoos u dhac ku yimi adeeg bixiyeyaasha xanaanada cunugga dhowaanahan xasiliyay, gobollada qaar ayaa sii wadaya inay arkaan hoos u dhac.
Sahaminta Mushaharka Bixiyaha
Booqashada guriga waa la ballaariyay.
Dadweynaha Washington waxay kor u kaceen in ka badan 400,000 5 sano, halka kartida carruurta xanaanada cunugga ay korortay kaliya 3,000 carruur ah.
Washington wuxuu ku jiraa 3aad ee waddanka ugu yaraan ugu yaraan xanaanada cunugga la awoodi karo ee ilmaha yar ee barnaamijka xannaanada carruurta ee qoyska. Celceliska kharashka ku baxa ilmo ku jira xarunta xanaanada cunugga waa 15.4% dakhliga dhexdhexaadka ah ee labada isqabta iyo 51.5% ee dakhliga dhexe ee hooyada hal hooyo. In kasta oo dakhliga qoysaska dhexdhexaadka ahi uu kordhay 5% taniyo 2010, heerarka xanaanada cunugga ayaa kor u kacay inta u dhaxaysa 13-20% xanaanada xarumaha iyo 11-31% ee daryeelka caruurta qoyska.
Child Care Aware ee Washington waxay bixisaa macluumaad faahfaahsan oo madaxbanaan si loo helo siyaasad wax ku ool ah.
Shan lambarrada ah ee Xusuusta Ilmaha Hore ee Carruurta : https://developingchild.harvard.edu/.
Machadyada Qaranka ee Caafimaadka "Daraasada Hore ee Daryeelka Ilmaha iyo Horumarka Dhallinyarta," https://www.nichd.nih.gov/research/supported/seccyd/
Maalgelinta Shanta Sano ee Maalgalinta Maalgelinta Usa Warbixinta 1. Machadyada Qaranka ee Caafimaadka "Daraasada Hore ee Daryeelka Ilmaha iyo Horumarka Dhallinyarta," https://www.nichd.nih.gov/research/supported/seccyd/
Daraasad Sare Heerka Waxbarashada Dugsi Hore ee Da'da 4: https://highscope.org/perrypreschoolstudy/